IBelt of Orion: kuyini, izici, izinganekwane kanye ne-nebulae | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 04/10/2021 17:45 | Isayensi yezinkanyezi
El Ibhande lika-Orion kungumlaza, okungukuthi, iqembu lezinkanyezi lakha isibalo sejometri kanti umugqa wakha ibhande elikhethekile. Leli qembu liqukethe izinkanyezi ezintathu eziqondanisiwe, ezibizwa nge-Alnitak, Alnilam, neMintaka. Zitholakala maphakathi ne-Orion ngesimo somzingeli. KumaGreki leli yibhande le-Orion, kuma-Arabhu kungumgexo wamaparele. AbaseGibhithe bacabanga ukuthi bangamasango ezulu. AbaseMaya bababiza ngamatshe amathathu esitofu. Njengamanje kunezintathu eMexico nakwezinye izingxenye zeLatin America Inkosi yemilingo noma imari ezintathu.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngebhande lika-Orion kusuka kwezinye izifiso zalo.
2 Izinkanyezi zebhande le-Orion
3 Umlando nezinganekwane zebhande le-Orion
IBelt of Orion yiqembu lezinkanyezi zomlaza i-Orion. Ibizwa ngebhande ngoba liyingxenye yesithombe somzingeli e-Orion. Izinkanyezi ezintathu ezihlangene ezakha ibhande lika-Orion zaziwa emhlabeni wonke njengeLas Tres Marías noma iTres Reyes Magos, futhi amagama azo yilawa: I-Alnitak, i-Alnilam neMintaka. Ezinye zezici zayo yilezi ezilandelayo:
Amazwe ase-Equatorial angayibona le nkanyezi unyaka wonke.
Yakhiwe ngezinkanyezi ezintathu, ezimise umugqa oqondile, nebhande le-garter eligobile.
Izinkanyezi eziyibhalayo zibizwa ngokuthi: i-Alnitak, i-Alnilam neMintaka.
Zitholakala eMilky Way, 915-1359 light years from Earth.
Izinkanyezi zebhande le-Orion
Lezi yizinkanyezi ezibaluleke kakhulu ebhande le-Orion:
I-Alnilam: Kuyinkanyezi e-blue supergiant esenkabeni yezinkanyezi ezintathu ebhande lika-Orion. Inomlando weminyaka eyizigidi ezine futhi ikhanya kakhulu futhi iqhelelene kakhulu nebhande. Ubukhulu baso buphinda izikhathi ezingama-4 kunelanga nelanga lokushisa komphezulu liyi-40 ºC. Kulinganiselwa ukuthi uzoba yisilomo esibomvu.
I-Alnitak: Inomlando weminyaka eyizigidi eziyi-6 futhi ubukhulu bayo buphinda izikhathi eziyi-16 kunelanga. Kuyiminyaka yokukhanya eyi-700 kusuka kithi. Izinga lokushisa kwaphezulu lishintsha lizungeze u-29.000 ° C, futhi kukholelwa ukuthi ekugcineni iyoba yinkanyezi ebomvu ebomvu.
IMintaka: Yinkanyezi enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka eyakhiwe ngezinkanyezi ezimbili eziyinambambili, icwebezela kakhulu, inesisindo esiphindwe ka-20 esilingana neLanga kanye nobushushu bomhlaba obungu-31.000 ºC. Ngaphezu kwalokho, ukuphela kwenkanyezi engabonwa eNyakatho naseNingizimu Poles.
I-Orion's Belt itholakala kuqoqo lezinkanyezi i-Collinder 70 enkabeni yomlaza i-Orion, iminyaka engu-915-1359 yokukhanya ukusuka eMhlabeni. Lokhu nakho kuse-equator yasezulwini. Kungabonakala eceleni kweFlamme Nebula ne-Horsehead Nebula ebizwa nge-Alnitak. Ngaphezu kwalokho, umlaza i-Eridanus useduze, neTaurus neCan Major neMinor. Ibhande le-Orion ngele-constellation i-Orion, liyinkanyezi ebaluleke kunazo zonke futhi eyaziwa kakhulu esibhakabhakeni, futhi futhi liyinkanyezi enkulu kunazo zonke futhi ekhanyayo emthaleni wethu.
Umlando nezinganekwane zebhande le-Orion
Njengeminye imiphakathi yasendulo eyayivumelanisa izakhiwo ne-Orion, abaseGibhithe bavumelanisa imibhoshongo yabo eGiza nezinkanyezi zase-Orion. I-vortex yale phiramidi ihlobene ngqo nenkanyezi ngayinye. AbaseGibhithe bakholelwa ukuthi ibhande lika-Orion laliwumnyango wezulu, nokuthi unkulunkulu ohlangane nabafile wayengumzingeli wase-Orion, ngakho-ke bangcwaba oFaro kulo maphiramidi.
Enye impucuko yasendulo eqondanisa amaphiramidi nezinkanyezi ezisebhandeni le-Orion impucuko yaseMexico, esemanxiweni aseTeotihuacan.
Izazi Ezintathu: Abantu abaningi bahlobanisa izinkanyezi ezintathu zebhande lika-Orion nabahlakaniphileyo abathathu (uMelchior, uGaspar, noBalthazar) abahamba besuka empumalanga beyohlangabeza uMsindisi uJesu futhi bamnika amabhokisi amathathu egolide ukuze abanikeze.
AbakwaMariya Abathathu: Izinkanyezi zebhande le-Orion zibizwa ngoTres Marías ngokuhlonipha uMaría, Marta noMargot. Ngesikhathi sombuso weLa, abesifazane abathathu abanesikhumba esimhlophe, izinwele ezikhanyayo namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka bafika ogwini lwaseMexico. Lezi zintokazi zamukelwa abomdabu abanesikhumba esimnyama. UMaria wazala umfana ogama lakhe lingu-Izus. Bahlaselwe ngabathandi bakaRa. Kwakungenxa yabo ukuthi babalekele eNhlonhlweni Yase-Iberia, lapho uMaria asungula khona iToledo kwathi uMarta wasungula iSara Gossa neBarcelona, ​​uMargot wasungula iJatiwa.
Kamuva, uMarta waya ngasogwini lweGreat Britain futhi wangena ezweni laseYurophu, wasungula iBerlin, iWarsaw neAmsterdam waze wafika eMoscow washonela khona. Okwesibili, UMaria noMargot kanye no-Izus basungula idolobha elikhulu esifundeni sase-Amazon esibizwa nge-El Dorado. Ekugcineni, bafika e-Iran naseNdiya, lapho uMargot nenkosana yombuso wakwaRa baba nendodana evela eBuddha noma eTao.
I-Orion Nebula ingesinye sezindikimba zasezulwini ezifundwa nezithwetshulwe kakhulu esibhakabhakeni sasebusuku, futhi futhi ingesinye sezici zasezulwini ezifundwa kakhulu. INebulae yembula okuningi ngokuthi izinkanyezi nezinhlelo zeplanethi zakha kanjani kusukela ekuweni kwamafu kagesi nothuli.
I-Horsehead Nebula iyingxenye yefu elikhulu e-Orion. Amanoveli amaningi alandelayo asebenzisa i-nebula ngendlela yefu elimnyama elingangeneki kalula. Abanye bacabanga ukuthi kunezinkanyezi eziningi namaplanethi ngaphambili kwendawo, ikakhulukazi ngemuva kwe-nebula.
I-Flame Nebula iyi-nebula yokukhipha etholakala enkanyezini i-Orion. I-nebula imayelana Iminyaka eyi-1.350 yokukhanya iqhelene noMhlaba futhi inobukhulu obubonakalayo obungu-2. I-Flame Nebula ithatha imizuzu engama-30 yesibhakabhaka. Kuyingxenye yesifunda esikhulu esakha izinkanyezi, kuyinkimbinkimbi yamafu e-Orion.
IFlame Nebula iqoqo lamakhulu ezinkanyezi ezisencane kakhulu, Ama-86% awo ane-periplanetary disc. Amalungu amancane kunawo wonke agxilwe maphakathi neqoqo, kanti amalungu amadala kakhulu atholakala ezifundeni ezingaphandle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngebhande lika-Orion nezimpawu zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ibhande lika-Orion
Iyini imimoya yokuhweba